Banijya News | नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिकः के छन नयाँ नीतिमा ? - Banijya News नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिकः के छन नयाँ नीतिमा ? - Banijya News
नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिकः के छन नयाँ नीतिमा ?
सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । शान्तिप्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु, सबै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो हुनु नेपाली कूटनीतिका राम्रा पक्ष रहेको र तिनै कुरा परराष्ट्र नीतिमा समेटिएको छ । परराष्ट्र नीतिमा संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तय गरिनुका साथै दुईपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक रणनीति तय गर्ने विषय पनि समेटिएको ज्ञवालीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोण र आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले परराष्ट्र नीतिको चुनौतीका रुपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट फाइदा हासिल गर्ने, कोरोना महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।
नयाँ नीति सार्बजनिक गर्दे ज्ञवालीले संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा मुलुक स्थिरतातर्फ गइरहेको कुरालाई समेट्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र नीति ल्याएको बताए । उनले भने, ‘हामीले प्राप्त गरेको स्थिरतालाई सुदृढ गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परराष्ट्र नीतिमा राख्नुपर्ने भएकाले राज्यको परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्ने भयो ।’